mardi, 23 avril 2019 22:11
Hopitaly Atsimo - Antsirabe: Faty telo tsy fantatra ny momba azy ao amin’ny “Morgue”
Ny iray maty naterin'ny olona tao amin’ny hopitaly Atsimo ny sabotsy 20 aprily tamin’ny 6 ora hariva, izay lehilahy tokony ho 45 taona.
Ny faharoa hitan'ny polisy ny Alatsinainy 22 aprily tamin’ny 8 alina teny akaikin'Andranomadio, dia naterina teny amin’ny hopitaly ary ny fahatelo dia hitan'ny olona tsy nahatsiaro tena fa mamo tampona ka naterina teny amin’ny hopitaly dia maty androany teo tamin’ny 6 maraina.
Mbola nahateny ny anarany ihany ity farany talohan’ny nialany aina, dia Rabezanahary Justin, avy any Ambohidranandriana Antsirabe II.
Tsy nisy taratasy ahafantarana azy avokoa izy telo lahy ireo, izay azo antoka fa matin'ny toaka avokoa.
mardi, 23 avril 2019 22:05
Ivandry-Antananarivo: Noraisin’ny Solontenan’i Papa ireo Filoham-piangonana FFKM
Tsy nisy nipika ny dinika fa raha ny loharanom-baovao dia tafiditra amin’ny fanomanana ny fandraisana an'i Papa François, izay hitsidika an’i Madagasikara ny 6 ka hatramin’ny 8 septrambra 2019 ity fihaonana, nandraisan'i Mgr Paolo Rocco Gualtieri, Solontenan’i Papa eto Madagasikara, ireo Filoham-piangonana efatra mirahalahy eo anivon'ny FFKM androany maraina teny amin’ny Nonciature Ivandry-Antananarivo.
mardi, 23 avril 2019 21:57
Halatra sokatra: Hiakatra Fitsarana ambony ireo tra-tehaka tao Betsinjaka-Toliara II
Telo lahy izy ireo no nomelohin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany eto Toliara, higadra enin-taona an-tranomaizina sazy mihatra, miampy onitra 100 tapitrisa Ariary sy 30 tapitrisa Ariary ho fanonerana ho an’ny ministeran’ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia ary ny ala, araka ny didy nivoaka tamin’ny 25 oktobra 2018.
Voampanga tamin’ny halatra sy fikasana hanondrana an-tsokosoko sokatra miisa 10.072 tra-tehaka tamin’ny 9 aprily 2018, tao Betsinjaka, Distrikan’i Toliara II, Faritra Atsimo-Andrefana izy telo lahy ireo.
Nampakatra Fitsana ambony ireo voampanga, ary dia hotsaraina ny alarobia 24 aprily 2019, ny raharaha. fanirian’ireo mpiaro ny tontolo iainana ny hanamafisan’ny Fitsarana ny sazy navoakan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany tamin’ny 25 oktobra 2018, mba ho anatry ny hafa.
mardi, 23 avril 2019 21:41
Marc Ravalomanana : “Angaha mikatso ny raharaham-pirenena ?”
Inona no nanaovana fianianana fa hanaja Lalampanorenana rehefa tsy hanaja. Fanamarihana nentin’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana io, omaly, raha naneho ny heviny ny antoko Tiako I Madagasikara tarihiny, mikasika ny fanapahan-kevitry ny fanjakana hikitika sy hanavao ny Lalàmpanorenana, ka hanaovana fitsapankevi-bahoaka mirazotra amin’ny fifidianana solombavambahoaka, hotanterahina amin’ny alatsinainy 27 mey 2019.
Nametra-panontaniana i Marc Ravalomanana nanao hoe : “Angaha mikatso ny raharaham-pirenena no misy fanovana atao amin’ny Lalàmpanorenena ? Na izany aza dia nilaza ny filoha nasionalin’ny Tiako I Madagasikara fa tsy olana ilay manitsy na manova Lalàmpanorenana saingy tokony atao ao anatina fifampidinihana izany.
mardi, 23 avril 2019 21:40
Sidina “Tsaradia” : Tsy tafapetraka teto Sambava noho ny toetr’andro
Gaga ny mponina teto Sambava omaly, tokony ho tamin’ny telo ora tolakandro, nahita ny fiaramanidin’ny “Tsaradia” an’ny kaompania Air Madagascar nihodinkodina efa ho in-telo teny amin’ny habakabaka nefa tsy nipetraka.
Raha ny fanazavana azo dia tsy nisy olana teknika fa noho ny toetr’andro tsy nahitana ny “piste” no anton’io fihodinkodinana io, hany ka voatery lasa tany Nosy-Be ary nijanona tsy satry tany.
Foana tanteraka ny sidina Tana-Sambava-Tana io omaly io niaraka tamin’ny “Tsaradia” ka androany maraina tamin’ny 8ora sy 10min vao nigadona teto Sambava ny mpandeha.
mardi, 23 avril 2019 15:29
Fitsapan-kevibahoaka: Mitondra fanazavana ny minisitry ny serasera
Nanazava mahakasika ny fitsapan-kevibahoaka sy ny fifidianana solombavambahoaka ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo io maraina io tetsy Anosy.
Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra ny votoatin'ny fanitsiana sy ireo fanontaniana apetraka, fa dia manamafy ny maha ara-dalàna ny fiantsoana ny fitsapan-kevibahoaka ny fitondrana.
mardi, 23 avril 2019 15:22
Aranta – Mahajanga: Lehilahy hita faty mifatotra rojo ny tongony
Mampiahiahy ity tranga teto Aranta ity. Lehilahy miboridana no hita faty, amin’izay indray mirojo ny tongony. Tombanana ho efa nisy namono tany ho any izy io, no natsipy tao anaty rano.
Efa nalefa ao amin’ny tranompatin’ny hopitalibe Androva ny faty miandry ny havany.
mardi, 23 avril 2019 15:02
Antsirabe: Mikatso ny asan'ny Kaominina
Nifanenjana ny mpiasan’ny Kaominina sy ny mpitandro filaminana io maraina io tao amin’ny « Voirie » Antsirabe.
mardi, 23 avril 2019 14:45
Toetr’andro: Misy rivodoza roa miforona ao amin’ny ranomasimbe indiana
Tamin’ny 09 ora teo, ny Voalohany dia any amin’ny 3660 Km avaratra atsinanan’Antsiranana, ny faharoa kosa dia any amin’ny 235 Km avaratra soamary avaratra atsinanan’Antsiranana. « Dépression Tropicale » ny herin’izy ireo amin’izao fotoana izao ka 55 Km/ora ny rivotra entiny sy tafiotra 75 Km/ora.
Tombanana hikisaka miakandrefana ilay rivodoza ao avaratr’Antsiranana ka manambana ireo Nosy ao avaratry ny lakandranon’i Mozambika, raha toa ka hikisaka mianatsimo atsinanana ny anankiray. Vinavinaina hitombo hery izy ireo ato anatin’ny andro ho avy.
Mitohy ny fanaraha-maso an’ilay ao avaratry ny Nosy.
(Sary: Satelita 23 aprily 2019 - 14h30)
Antsirabe: Loto sy fofona maimbo rainkona no navelan’ny fety
Nitobaka ny fako nanodidina ny Gara sy ireo toerana nanaovana hetsika nankalazana ny Paka teto Antsirabe, ary tena tsy azo hiainana ny fofona aterak'izany. Ny olana anefa dia tsy misy ireo mpiasa manala ny fako satria mbola manohy ny fitokonany ireo mpiasan'ny Kaominina.
Namoahan'ny Prefektiora didy ny famoahana ireo fitaovana fanadiovana ao amin'ny « Voirie » androany maraina, saingy tsy mbola tanteraka izany na efa tonga teo aza ny Emmo-Reg ny atoandro teo.